Trailer 'The Matrix: Resurrection' ga -eme ka ị kwuo "Whoa" - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Trailer 'The Matrix: Mbilite n'Ọnwụ' ga -eme ka ị kwuo "Whoa"
Trailer 'The Matrix: Mbilite n'Ọnwụ' ga -eme ka ị kwuo "Whoa"
Na -azụ Isi Gị
by Trey Hilburn III September 9, 2021 7,640 echiche
The Matrix: Mbilite n'ọnwụ trailer bụ n'ikpeazụ ebe a. A gbasapụla uche anyị nke ọma. Site na nkwalite Matrix ahụ ruo Maazị Anderson ọnọdụ ọhụrụ na ụlọ mkpọrọ yana ọrụ waya ọhụrụ na kung-fu. Anyị hụrụ ihe niile anyị hụrụ n'anya.
Anyị achọghị ọtụtụ ihe iji ree anyị na ịlaghachi na Matrix, mana nke a karịrị atụmanya anyị. Anyị na-alọta ụwa na-agba ume n'ụzọ ọhụrụ ma anyị enweghị ike ichere ka ọ banye anyị.
Ndị na -eme ihe nkiri Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Jessica Henwick, Christina Ricci, Ellen Hollman, Priyanka Chorpa Jones, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Lambert Wilson, Jada Pinkett Smith na ndị ọzọ.
The Matrix: Mbilite n'ọnwụ nwere gị mgbe ọ bịarutere na ụlọ ihe nkiri na HBO MAX malite na Disemba 22.